ထင်သလောက် မဆိုးရွား တဲ့ ဖာဘင်ဟို ရဲ့ ဒူးကောက်ကြော ဒဏ်ရာပြဿနာ – MySport Myanmar
ထင်သလောက် မဆိုးရွား တဲ့ ဖာဘင်ဟို ရဲ့ ဒူးကောက်ကြော ဒဏ်ရာပြဿနာ
လီဗာပူးအသင်း နည်းပြ ဂျာဂျန် ကလော့ပ် ကတော့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖာဘင်ဟို ရဲ့ ဒူးကောက်ကြော ဒဏ်ရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစပိုင်းကတော့ စိုးရိမ်ခဲ့ရပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ သက်ပြင်း ချနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ မစ်ဂျေးလန်း နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ‌လီပါဗူး အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗန်ဒိုက် နဲ့ မာတစ်တို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ဒဏ်ရာ ပြဿနာကြောင့် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ကလော့ပ် အနေနဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖာဘင်ဟို ကို ထိုပွဲမှာ နောက်တန်းနေရာကို ဆင်းကစား စေခဲ့ပါတယ်။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ မိနစ် ၃၀ အရောက်မှာ ဖာဘင်ဟို တစ်ယောက် ဒူးကောက်ကြော ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖာဘင်ဟို နေရာမှာတော့ လူငယ် အကယ်ဒမီ ကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ရိုင်းစ် ဝီလီယံ ကို ထည့်သွင်း ပြီးတော့ ဂျိုးဂိုးမက်ဇ် နဲ့ တွဲဖက် ကစားစေခဲ့ပါတယ်။
ကနဦး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ လီပါဗူး အသင်းအနေနဲ့ ဖာဘင်ဟို ကို အချိန်တစ်ခုကြာအောင် ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ကြပေမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က စစ်ဆေးတဲ့ အဖြေ တွေ အရတော့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကစားသမား ဖာဘင်ဟို ရဲ့ ဒဏ်ရာက ထင်သလောက် မဆိုးရွားပါဘူး ဆိုပြီး Mirror သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဖာဘင်ဟို အနေနဲ့ ခြောက်ပတ်ကြာ အနားယူရမယ့် သတင်းတွေကလည်း အခုချိန်မှာ ပျောက်ကွယ် သွားပြီးတော့ အခုချိန်မှာ ပြန်လည် သက်သာလာဖို့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်လောက်သာ ကြာမြင့်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ် ကန်ရမယ့် အပတ် ပြီးရင်တော့ ပြန်လာနိုင်ပြီလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဘင်ဟို အနေနဲ့ စနေ နေ့မှာ ကစားမယ့် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင်ကစားနိုင်အုန်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုဝင်ဘာလ အစပိုင်းလောက်မှာ ကစားမယ့် အတ္တလန်တာနဲ့ ပွဲစဉ်၊ မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲစဉ် တွေမှာလည်း ပွဲကြည့်စင်ကပဲ လီဗာပူးအသင်း အတွက် အားပေးနိုင်အုန်းမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်စတာနဲ့ ပွဲအပြီး နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်ကြောင့် ခန နားရတဲ့ အပတ်ပြီးရင်တော့ ဖာဘင်ဟို အနေနဲ့ ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။
လာမယ့် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ့ ပွဲမှာတော့ လူငယ် ကစားသမား ဝီလီယံ အနေနဲ့ ပွဲထွက် လူစာရင်းမှာ ပါဝင်လာနိုင်ချေ ရှိပြီးတော့ ကလော့ပ် အနေနဲ့ နောက်ထပ် အကယ်ဒမီထွက် လူငယ် ခံစစ်သမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ နတ်ဖီးလစ်ဖ် နဲ့ ဘီလီ ကူမီတီရို တို့ကို အခွင့်အရေး ပေးသွားမလား ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကပ္ပတိန် ဂျော်ဒန် ဟန်ဒါဆန် ကတော့ စနေနေ့ ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မာတစ် အနေနဲ့ မကြာခင်မှာ ဒဏ်ရာပြဿနာက သက်သာလာပြီး ပြန်လည်ကစားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကလော့ပ်ကတော့ ဒဏ်ရာက သက်သာလာပြီးနောက် တန်းပြီးတော့ လူစာရင်းမှာ ထည့်သွင်း အသုံးမပြုသေးဘူးလို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
“ အဲ့ဒီပွဲ က ကျွန်တော်တို့ ကစားရမယ့် တစ်ခုတည်းသော ပွဲစဉ်ဆိုရင်၊ ဒီရာသီ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်သာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ သူ့ကို ထည့်သွင်း ကစားခိုင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်သုံးရက်နေရင် ကျွန်တော်တို့ ကစားရအုန်းမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကစာသမားတွေ ထပ်လို အုန်းမှာပါ။ဒဏ်ရာ ရထားတဲ့ ကစားသမားတွေကို သူတို့ ပြန်သက်သာလာတဲ့ ပထမနေ့မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ သုံးလို့ မရပါဘူး။ သူတို့ အနေနဲ့ ရာသီလက်ကျန် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် သင့်လျော်တဲ့ တည်ဆောက်မှုမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက ဒဏ်ရာ ရပြီး သက်သာလာတဲ့ ကစားသမားတွေ ကြားမှာ တစ်ချိန်လုံးဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေပါ။ သူတို့ ကစားနိုင်သေးရဲ့လား ? တစ်ခြားသူတွေကို ဘယ်ချိန် ထပ်သုံးလို့ ရမာလဲ ? ” စသည်ဖြင့် ကလော့ပ်က ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-10-29T20:22:53+06:30October 29th, 2020|Champions League, Football, Premier League|